Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Taratasy misokatra faharoa nataon'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny UNWTO mandrisika ireo firenena mpikambana hanome alalana ny fifidianana sekretera jeneraly vaovao sy mety.
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao havaozina • WTN
Taratasy misokatra faharoa ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO dia natolotry ny mpiasan'ny UNWTO zokiolona teo aloha sy ny manamboninahitra miaraka amin'ny antso maika ho an'ireo firenena mpikambana mba hihetsika ankehitriny. Nilaza ilay taratasy fa mifanaraka amin'ny andininy faha-43 amin'ny Fitsipika momba ny Fivoriambe, dia azonao atao ny mangataka latsa-bato miafina momba ny fanamafisana ny fandaharam-potoanan'ny Sekretera Jeneraly amin'ny fivoriambe ho avy any Madrid. Raha ny latsa-bato no mamaritra izany dia anjaran’ny Filankevitra mpanatanteraka ny hanao zotram-pifidianana vaovao sy araka ny tokony ho izy.
Ireo manamboninahitra ambony ao amin'ny UNWTO, anisan'izany ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, dia nivory voalohany tamin'ny Desambra 2 ary nanolotra taratasy misokatra ho an'ny "WTN ho an'ny fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO" natomboky ny World Tourism Network vao naorina tamin'izany fotoana izany.
Androany sy andro vitsivitsy talohan'ny Fivoriambe ho avy, dia nivory indray ny vondrona manamboninahitra ambony ao amin'ny UNWTO, anisan'izany ny sasany amin'ireo manamboninahitra nandray anjara tamin'ny fampielezan-kevitra WTN ho an'ny fahamendrehana. Taratasy misokatra ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO momba ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra etika momba ny kolontsaina sy ny fomba fitantanana ao amin'ny fikambanana.
Ny taratasy ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO sy ireo minisitry ny fizahantany dia manentana ireo minisitra sy solontena mba hanokatra ny varavarana amin'ny fifidianana vaovao sy mety ho an'ny sekretera jeneraly amin'ny fivoriambe ho avy.
Izahay, mpiasan'ny UNWTO teo aloha, teo ambany sonia teo aloha, dia te-hitondra ny saina maika ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ny zava-baovao mampikorontan-tsaina voarakitra ao amin'ny tatitra* nataon'ny tompon'andraikitra momba ny etika momba ny fitotongan'ny fitsipi-pitondrantena hita eo ambanin'ny fitantanana ambony UNWTO ankehitriny.
* Tatitra nataon'ny tompon'andraikitra momba ny etika, tamin'ny 23 aogositra 2021 ary nalefa tany amin'ny Fihaonambe tamin'ny alàlan'ny antontan-taratasy A/24/5(c) “Tatitry ny Human Resources”
Mifototra amin'ireo fikarohana mampikorontan-tsaina ireo, dia soso-kevitra ny Firenena mpikambana mba handinika azy ireo alohan'ny handinihana ny fanendrena indray ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao ho an'ny vanim-potoana 2022-2025 ao amin'ny Fihaonambe XXIV any Madrid, Espaina; ary manasa ny Biraon'ny Firenena Mikambana momba ny Sampan-draharahan'ny Fanaraha-maso Anatiny hanao fanadihadiana anatiny lalina.
Efa elaela ihany izahay no nitahiry fanahiana tsy mitsaha-mitombo ny amin’ny fitantanana ara-moraly ny Fikambanana, izay nohamafisina sy nohamafisina ankehitriny, ao amin’ilay tatitra voatonona etsy ambony.*
Tsindrio eto raha hamaky ny tatitra.
Ao amin'ny tatitra nataony tany amin'ny Fihaonambe, ny tompon'andraikitra momba ny etika dia mamaritra fironana mampanahy eo amin'ny fomba fitantanana ny Fikambanana. Indrindra indrindra, ny tatitra dia milaza fa "Noho izany, miaraka amin'ny ahiahy sy alahelo tsy mitsaha-mitombo no nahitany fa ny fomba fanao anatiny mangarahara, izay efa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha, anisan'izany ny momba ny fisondrotana, ny fanavaozana taorian'ny fanasokajiana, ary ny fanendrena, dia natsahatra tampoka ka namela toerana malalaka ho an'ny tsy fahampiana sy fitantanana tsy misy dikany.. "
Mino izahay fa, araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra momba ny etika, raha tsy azo ampiharina afa-tsy amin'ny loharanon-karena sahaza sy saina misokatra, ny fitantanana manjavozavo sy tsy misy kilema dia toa fihetsika manjaka sy fanao mitohy eo ambany fitarihan'ny mpitondra ankehitriny.
Manjary mahakivy indrindra izany raha tamin’ny fiandohan’ny fe-potoam-piasan’ny Sekretera jeneraly ankehitriny, tamin’ny May 2018, tao amin’ny Filankevitra mpanatanteraka faha-108, dia natolotra ho an’ireo firenena mpikambana ny “Fanamafisana ny fitantanana anatiny” ho laharam-pahamehana ho an’ny fitantanana anatiny ny Fikambanana.
In manokana, ao amin'ny antontan-taratasy CE/108/5(b) rev 1 (Vina sy laharam-pahamehana amin'ny fitantanana ) , voalaza fa ny kolontsaina etika ao amin'ny Organisation no tena zava-dehibe, na dia manendry aza ny tompon'andraikitra ara-moraly izay manao sonia ny tatitra.
Rehefa mamaky ny tatitry ny tompon'andraikitra etika dia toa tsy ny kolontsaina etika no tena zava-dehibe.
Izany dia ambonin'ny zavatra hitan'ny mpiasa teo aloha mivantana, izany hoe tranga manokana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana tsy ara-drariny avy amin'ny fitantanan'ny UNWTO amin'izao fotoana izao, ny sasany amin'izy ireo dia efa nampiakatra fitsarana ambony teo anatrehan'ny Tribonaly Administrative ILO. Na izany aza, noho ny fahamalinana sy ny fahalalam-pomba dia nisafidy ny tsy hilaza anarana izahay.
Ohatra iray hafa amin'ny fihetsika mampiahiahy nataon'ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao ny tolo-kevitry ny handrosoana ny Filankevitra mpanatanteraka, izay tsy maintsy nifidy ny sekretera jeneraly mandritra ny efa-taona manaraka, dimy volana mialoha ny fandaharam-potoanany (Janoary fa tsy amin'ny volana Mey). Jona).
Io tetika io dia nanakana ny firenena mpikambana tsy hanolotra kandidà noho ny tsy fahampian'ny fotoana ary amin'ny farany dia Governemanta iray ihany no afaka manolotra filatsahan-kofidiana mifanaraka tanteraka, raha oharina amin'ny isan'ireo kandidà manan-kery azo natolotra tamin'ny fifidianana teo aloha. Ary rehefa niseho tao Madrid ny kandidà ho amin'ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka, dia norarana tsy hanatrika hetsika ara-tsosialy izy.
Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa tena nampalahelo ny daty voafantina satria maro ireo delegasiona tsy afaka nanatrika noho ny lalàna mifehy ny areti-mifindra tany Espaina tamin’izany fotoana izany. Ny voalaza ho fanamarinana dia ny hisian'ny fivorian'ny Filankevitra mpanatanteraka mifanandrify amin'ny Foara Iraisam-pirenena momba ny fizahantany any Madrid (FITUR), saingy rehefa nafindran'ny governemanta Espaniola tsy ho ela ny FITUR tamin'ny volana Mey, dia tsy nety nanitsy ny datin'ny fivorian'ny Filankevitra ny sekretera jeneraly. .
Ankoatra izay, tsy azo natolotra tamin’io Filankevitra io ny kaontim-bola nohamarinina araka ny fepetra takian’ny lalàna, ka mahatonga ny fivoriana ho tsy ara-dalàna, mampametra-panontaniana ny maha-ara-dalàna ny zotram-pifidianana, araka ny nambaran’ny sekretera jeneraly roa teo aloha tamin’ny fomba misokatra. taratasy.
WTN ho an'ny fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO
Tsara ihany koa ny manamarika fa nilaza mazava ny tompon’andraikitry ny etika fa tsy nahavita ny asany teo ambany fitantanana amin’izao fotoana izao izy, ka noho izany dia nanoro hevitra ny hamindrana ny biraon’ny etika ivelan’ny Fikambanana.
Noho ireo voalaza etsy ambony ireo dia miantso anareo izahay mba hijery manokana ny kolontsain'ny tahotra sy ny valifaty izay niharan'ny mpiasan'ny UNWTO, izay mitarika ho amin'ny fanimbana tsy tapaka sy fandaniam-poana ny harenan'ny mpiasa sarobidy, izay tsy sahy mitaraina, na mandray ny fanapahan-kevitra ilaina mifandraika amin'ny asany, tahaka ny andrasan'ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana amin'izy ireo.
Amin'izany, ary mifanaraka amin'ny andininy faha-43 ao amin'ny Fitsipika momba ny Fihaonambe, dia azonao atao ny mangataka latsa-bato miafina momba ity lohahevitra ity, ary raha ny latsa-bato no mamaritra izany, dia mandidy ny Filankevitra Mpanatanteraka hanangana vaovao sy mety. zotram-pifidianana.
Mino izahay fa ny fitantanana “tsy misy dikany sy manjavozavo”, araka ny nasongadin'ny tompon'andraikitra momba ny etika, dia tsy manana toerana ao amin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana, anisan'izany ny UNWTO - ny Fikambananao - izay napetrakao mba hiarovana amin'ny fitantanana tsy mety sy ny fanararaotana.
Noho izany, azonao atao ny maniry ny handray ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo rehefa mandinika ny Agenda 9 momba ny fanendrena ny sekretera jeneraly mandritra ny vanim-potoana 2022-2025, ary mandinika ny karazana fitantanana tianao ho hita mandritra ny efa-taona manaraka. Eo am-pelatananao ny hoavin'ny Fikambanana.
Madrid, 15 Novambra 2021
Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny UNWTO 2010-2017
Adriana Gaytan, Lehiben'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao sy Fifandraisana UNWTO 1996-2018
Carlos Vogeler, Tale Mpanatanteraka UNWTO ho an'ny Fifandraisana amin'ny Mpikambana 2015-2017, Tale ho an'ny Amerika 2008-2015, ary Filohan'ny Mpikambana Affiliate teo aloha
Emi MacColl, mpiasan'ny UNWTO hatramin'ny 1980, Chef de Cabinet, Biraon'ny Sekretera Jeneraly 1996-2017
Esencan Terzibasoglu, Talen'ny UNWTO, Fitantanana ny Destination sy Quality, 2001-2018
Eugenio Yunis, mpiasan'ny UNWTO nanomboka tamin'ny 1997, Talen'ny Fandaharana sy Fandrindrana 2007-2010, Mpiandraikitra ny Etika 2017-2018 ary mpikambana taloha tao amin'ny Birao UNWTO momba ny Etika fizahan-tany
J Christer Elfverson, Mpanolotsaina manokan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO 2010-2017 ary mpiasan'ny ONU teo aloha hatramin'ny 1970
John Kester, mpiasan'ny UNWTO hatramin'ny taona 1997, Talen'ny statistika, fironana ary politika 2013-2019
Jose García-Blanch, Talen'ny Fitantanana sy Fitantanam-bola UNWTO 2009-2018, ary mpiasan'ny FMI sy WIPO teo aloha
Márcio Favilla, Tale Mpanatanteraka ho an'ny Fandaharanasa Opérationnel sy Fifandraisana Andrimpanjakana 2010-2017
Hon. Minisitra : Eo am-pelatananareo ny hoavin’ity fikambanana ity.